युट्यूब ट्रेन्डिङमा नम्बर १ बन्यो वारको ट्रेलर, ४ दिनमा कतिले हेरे? - Everest Dainik - News from Nepal
युट्यूब ट्रेन्डिङमा नम्बर १ बन्यो वारको ट्रेलर, ४ दिनमा कतिले हेरे?
बलिउड अभिनेता द्वय ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफको एक्सन प्याक्ड फिल्म “वार” को ट्रेलर भिडियो युट्युमा ट्रेण््डींग लिष्टको टपमा रहेको छ । फिल्मको ट्रेलरमा एक्सन र सस्पेन्स देखिन्छ ।
आगामी दुई अक्टोबरमा रिलिज हुने चलचित्रको ट्रेलर ४ करोड पचास लाग बढीले हेरिसकेका छन ।
याे पनि पढ्नुस दश वर्षे जनयुद्धमा देशभर कहाँ के भएको थियो ? [विवरणसहित]
याे पनि पढ्नुस ऋतिक रोशनलाई मन पराएको भन्दै श्रीमतीको हत्या
ट्याग्स: hritik roshan, war